Ukwenza ikhaya lethu lihlakaniphe
Amakhaya amaningi namuhla afakwe amakhamera okuphepha nezinzwa zokuqwashisa abanikazi uma othile ehamba empahleni yakhe, noma iyilungu lomndeni, ...
Amakhaya amaningi namuhla ahlanganisweamakhamera okuphephaFuthi izinzwa zokuqwashisa abanikazi uma othile ehamba empahleni yakhe, noma iyilungu lomndeni, ophethe mail noma ongenayo. Inkampani yaseChina LS Vision ilungiselele izinhlobo eziningi zemikhiqizo ezingakusiza ukuvikela umndeni wakho nempahla yakho.
Into yokuqala okufanele sazi yilokho esikusebenzisa izinto ezihlakaniphile. SmartIkhamera ye-P2P Angavumela abazali ukuthi bakwazi ukuthi izingane zabo zibuyele ekhaya zivela esikoleni, noma ukuthi iphakethe lihanjiswe emnyango wabo. Kungazisa futhi uma umuntu ongaziwa eseqede empahleni yakhe.Ungabona amalungu omndeni wakho kuhlelo lokusebenza ngocingo olusekhaya ngekhamera. Ungakhuluma nabo nganoma yisiphi isikhathi uma ifoni yakho ixhunyiwe kwi-Intanethi. Vele ngaso sonke isikhathi lapho othile engena endlini, ikhamera ye-Smart Thumela imininingwane kwi-smartphone yomnikazi. Futhi konke okungenhla kuwukusetshenziswa okulula kakhulu kwekhamera eyodwa ye-IP.
Siphinde sibe ne-Smart DVR noma i-NVR Recorder System ye-Android noma i-iOS. Izindaba ezimnandi ukuthi imikhiqizo eminingi ehlakaniphile izoza kuwe kungekudala. Siyaqiniseka ukuthi uzoba nempilo ephephile nekhwalithi yemikhiqizo yethu yombono ye-LS.
Uma ufuna ukwazi eminye imikhiqizo ethokozisayo, sicela uchofoze lapha ukuze ubuke okuningi.
PHAMBI Ikhamera yomzimba iza!
Lapho ubheka ubuhle bendawo, kuyakubona endaweni OLANDELAYO